आधुनिक संसारमा उच्च गुणवत्ता सामाग्री, नवीनतम प्रविधि र उपकरण प्रयोग बिना गर्न सक्नुहुन्न। सबै को पहिलो हामी आवासीय भवन निर्माण बारे कुरा गर्दै छन्। सामाग्री गुणस्तर, आफ्नो लागत र कामको जटिलता चयन मा कारक निर्धारण छन्। क्लासिक ईटा को प्रयोग हो, तर एकै समयमा यो महँगो निर्माण हो। बजार उच्च गुणवत्ता र अपेक्षाकृत कम लागत छ कि सामाग्री को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। ब्लक घरहरू - भनेर नजिक ध्यान गर्नुपर्छ के। यी आवासीय भवन यो सबै आधार सामाग्री मा निर्भर गर्दछ, धेरै प्रकार मा विभाजित छन्।
फोम ठोस वा कृत्रिम पत्थर, यसलाई भनिन्छ रूपमा, फोम ब्लक को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ। मुख्य घटक सिमेन्ट हो, त्यसैले ठूलो लगानी आवश्यक छैन। घरहरू निर्माण गर्ने फोम ब्लक को महंगा छैन भन्न सकिन्छ। सामान्य मा अवरोध घरहरू तिनीहरूले जवान छोराछोरीलाई छ, विशेष गरी यदि जोडे लागि महत्त्वपूर्ण छ, जो राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन, छ।
तिनीहरूलाई को भित्री भाग एक porous संरचना छ देखि, aerocrete - फोम ब्लक दोस्रो नाम छ। गुणस्तर मामलामा तिनीहरूले अक्सर काठ तुलना गरिन्छ। तपाईं penobolokah लागि बन्द भने निर्माण प्रक्रिया सरलीकृत गरिनेछ।
अर्को झन् लोकप्रिय shlakoblochnogo घर। एक कम लागत मा सबै व्यापार अन्य यस्तै सामाग्री संग जब तुलना। कायम र यातायातका विशेष अवस्था आवश्यक छैन गर्न Unpretentious cinder ब्लक। तर सबै यो साथ, तिनीहरूले निर्माण अतिरिक्त आवश्यकता कम थर्मल इन्सुलेशन छ घर को इन्सुलेशन। र पनि यो बावजुद, काम र भौतिक लागत अपेक्षाकृत सानो हो तुलना ईटा घर।
ब्लक घरहरू निर्माण महत्त्वपूर्ण लाभ छ। पहिले, सामाग्री को Lightness बल, निर्माण को विश्वसनीयता र स्थायित्व असर गर्दैन। काम को गति धेरै उच्च छ। यस्तै सामाग्री पाउन गाह्रो छ। ब्लक घरहरू टर्नकी सबै समावेश खत्म काम, तपाईं तुरुन्त कब्जा गर्न जो पछि गर्न सक्छन् आफ्नो घर सुसज्जित गर्न। यो मूल्य यो छ - यदि खाली क्यानभास मा रूपमा मौका आफ्नो डिजाइन विचार महसुस गर्न! दोश्रो, महत्वपूर्ण कारक कि मड्यूलर घरमा कम छैन छ। तेस्रो, ध्वनि इन्सुलेशन को एक उच्च डिग्री, साथै लामो समय को लागि कोठा मा गर्मी राख्ने गर्न ब्लक को भवनहरु केही प्रकार को क्षमता आफु को लागि कुरा। चौथो, सरल सजावट र यसको उच्च गुणस्तर। ब्लक घरहरू तपाईं (मार्न बसाई सराई बाट) मोहरा को कुनै पनि प्रकार प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
यस ब्लक को संरचना को विशेष सुविधाहरू प्रदान गर्दछ विभिन्न घनत्व सामाग्री को एक विकल्प, यो धेरै तलाहरू घरहरू निर्माण मा आवश्यक छ। बिछाउने बरु सिमेन्ट भन्दा एक विशेष टास्ने मा गरिन्छ। विभिन्न geometrical आकार को ब्लक विभिन्न डिजाइन सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। भवन निर्माण सामाग्री ठोस ब्लक र cinder ब्लक को व्यापक चयन बीच एक धेरै लाभदायक स्थिति हो।
घरहरू र कटेज निर्माण: को लागत विचार गर्नुहोस्।
सबैभन्दा उच्च गुणस्तरीय laminate फर्श के हो? ग्राहक समीक्षा
बाल वजन प्राप्त छैन? कारण पत्ता लगाउन!
MFP भाइ DCP-1512R - मुद्रण गुणवत्ता र लागत को एक महान संयोजन
Plantain। उपयोगी गुण र व्यञ्जनहरु
मशरूम संग आलु - व्यञ्जनहरु